ONLF: Waan ka qeybgaleynaa doorashada haddii ay xalaal tahay. – Xeernews24
ONLF: Waan ka qeybgaleynaa doorashada haddii ay xalaal tahay.
„ONLF oo baaqaasi ka jawaabtay waxay ku dhawaaqday xabbad joojin iskeed ah“, ayuu yiri Cabdiraxmaan Maadey oo saxaafadda la hadlay.
„Isla-markiiba waxaa billaawday wadahadalladi Dowladda Federaalka iyo Jabhadda ONLF. waxaan kala saxiixanay heshiis nabadeed, labada dhinacna waxay qaadeen tallaabbooyin muhiim ah si dagaallada loo soo afjaro.“
Guddoomiyaha Xisbiga ONLF ayaa sheegay: „ONLF waxay markale halkan ka caddeyneysaa iney ka go’antahay marxaladaha nabadgalyada, ayna sii wadeyso xuquuqaha shacabka Soomaalida iyo shucuubta kale ee Itoobiya si waafaqsan siyaasad nabadgalyo iyo dimuqraadiyad ku saleysan.“
„Sidaa darteed ONLF waxay xoogga saareysaa xoojinta nabadglyada, maamulka suubban, dib u dhiska dalka iyo iney xaqiijiso shacabka Soomaalida iney heleen xuquuq buuxda oo ay iskood isku maamulaan“, ayuu yiri.
Cabdiraxmaan Mahdi maadey ayaa yidhi: „ONLF waxaa ka go’an iney door muhiim ah ka ciyaarto marxaladda nidaamka dimuqraadiyadda laga yagleelayo Itoobiya waxayna si buuxda uga qayb qaadaneysaa doorashada soo socota“.
Wuxuu tilmaamay in ay rajeynayaan in codeyna ay noqoto „mid si xaq ah u dhacda, oo Itoobiya oo dhanna nabad u horseeda“.
Wuxuu caddeeyay in ONLF aysan dooneyn in doorashada dib loo dhigo. „Waxaan dooneynaa iney doorashada xilligeeda ku qabsoonto. haddii ay dhacdo in doorashada dib loo dhigo, waa in ay uga wacnaan karto uun si xisbiyada iyo jabhadaha mucaaradka looga qayb galiyo awood wax qeybsiga dalka.“
„ONLF waxay aaminsan tahay ra’isal wasaare Abiy Axmed iney ka go’antahay in nabad waarta iyo isbeddel dimuqraadiyadeed uu ka dhaco dalka Itoobiya,“ ayuu yiri Cabdiraxman Maadey.
„Sidaa darteed ONLF waxay si buuxda u taageereysaa dadaalkiisa iyada oo diyaar u ah iney kala shaqeyso geeddi socodka dimuqraadiyadda,“ ayuu yidhi.
Cabdiraxmaan Maadey ayaa sheegay in deegaanka Soomaalida uusan „door weyn ku lahayn go’aannada dowladda dhexe“ ee Itoobiya.
„Waxaan dooneynaa in la kordhiyo doorka go’aamineed ee uu shacabka Soomaalida uu ku leeyahay dowladda dhexe gaar ahaanna marka siyaasadaha guud ee dalka la dajinayo,“ ayuu yiri.
Mowqifka ONLF ayaa ah in deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu ka madaxbannanaado Itoobiya inteeda kale. Balse Guddmoomiyaha Xisbigooda ayaa sheegay in ay „aaminsan yihiin in shucuubta Itoobiya ay dhiiggooda u soo daadiyeen in ay helaan ismamullo si sharci ah loogu aqoonsaday dastuurkii Itoobiya ee 1995“.
„ONLF waxay dhowreysaa xuquuqahaasi dastuuriga ah ee ay ONLF taageereyso in la helo“, ayuu yidhi Maadey.
Wuxuu intaas ku daray „Nidaamka Federaalka ee dalka Itoobiya ka jira ayaa ah midka dammaanad qaadi karo jiritaanka qowmiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya.“
„Marka isku day kasta oo lagu doonayo in nidaamkaas lagu burburiyo waxay keeneysaa iney dalka Itoobiya oo dhan ay colaadaha dib uga bilawdaan.“
Asigoo ka hadlayay waxa ay ila tahay in Soomaalida ay doonayaan, wuxuu yiri maadey : „Shacabka deegaanka Soomaalida oo mudda badan lagu hayey xasuuq iyo gabood fallo, waxay marwalba taageerayaan nidaamka Federaalka iyo ismaamul madax bannaan.“
„ONLF waxay aaminsan tahay in nidaamka dimuqraadiyadda ee ka hanaqaaday dalka Itoobiya inuusan dhammeystirneyn, uuna u baahan yahay in wax badan laga beddelo, isla-markaana si buuxda loo meel mariyo xuquuqaha dastuurka ku cad.“
„Waxaa kale oo ay aaminsan tahay (ONLF) iney qowmiyadaha dalka u sinneen qaab dhismeedka federaalka iyo hoggaaminta dalka. Waxayna rajeyneysaa in laga shaqeeyo sidii arrimahaasi wax looga baddeli lahaa, loona meel marin lahaa sida ugu dhakhsaha badan“.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/Ogadenia.jpg 292 500 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-21 17:32:582019-08-21 17:32:58ONLF: Waan ka qeybgaleynaa doorashada haddii ay xalaal tahay.
Mudaaharaad Rabashado wata oo Ka Socda magaalada Laas-caanood. [SAW... Socdaalkii Cismaan Saalax ee Hargeysa ma Somaliland baa qalad fahamtay mise...